onlinedarpan.com Nepali News Portal, we delivered latest news update from nepal, Breaking News, Latest, Politics, World, Economy, Entertainment, Sports, Technology, Blog, Cartoon, Opinion, Science, Interview, Health, Photo
Sunday 3rd of July 2022 / 12:10:00 PM
अनलाइन दर्पण 2021-01-07
काठमाडौं । मौसन परिवर्तन हुँदा मानिसको मुड पनि परिवर्तन हुन्छ । अध्ययनले के पनि भन्छ भने जाडो मौससमा अन्य मौसमको तुलनामा यौनको इच्छा पनि बढी हुन्छ । तर, जाडोमा चिसो लाग्न सक्ने हुनाले सेक्सका क्रममा पनि केही सावधानी भने अपनाउनुपर्छ ।
अनलाइन दर्पण 2020-04-24
यौ’न हरेक ब्यक्तीलाइ चाहिने कुरा हो । हाम्रो समाजमा यसलाइ खुला रूपमा लिने गरेको पाइदैन । तर यसलाई सहज रुपमा लिन आवश्यक छ । यौ’नका कारण नै कतिपय अवस्थामा पार्टनहरुबीच स’मस्या उत्पन्न हुने गरेको छ भने श्रीमान् श्रीमतीमा पनि यौ&rsqu
अनलाइन दर्पण 2019-12-18
महिलालाई महिनावारीका बेला पीडा हुने गरेको छ । धेरै महिलाहरू महिनावारीको समयमा हुने दुखाईबाट पीडित हुन्छन् ।
महिनावारीको बेला महिलाको शरीरमा अनेक प्रकारका हार्मोनल परिवर्तन हुने गर्छ । महिनावारी भएका बेला महिलाहरूले खानपान लगायत धेरै कुरा
यौन र स्वास्थ्यबारे जानकारी हुन अति आवश्यक छ । हाम्रो समाजमा यस्ता विषयमा त्यति चासो दिएको पाइदैन । यसको विकाससंगै यौनप्रतिको उत्सुकता बढेर जान थाल्दछ । महिलामा १२-१३ वर्ष र पुरुषमा १४-१५ वर्षदेखि यौन अंगको विकास सुरु भएको पाइन्छ । तर यौनका विषयमा
हरेक दम्पतिको बैवाहिक सम्वन्ध सफल बनाउन यौन जीवनको पनि ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ । अधिकांश मानिस यौन चिकित्सकलाई दुई प्रश्न सोध्ने गर्छन् । पहिलो – यौन जीवनलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ ? अर्को – कसरी लामो समयसम्म यौन सम्पर्क कायम राख्न अ
श्रीमान श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन् । जीवनमा यी दईबीचको मेल हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ । सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्छ । विवाहपछि स्त्री र पुरुषको सम्बधलाई पूर्ण रुपमा सही र शुभ मानिन्छ । तर श्रीमान श्रीमती टाढा बस्नु पर्ने दिन
नेपाली समाजमा अझपनि सेक्स (यौन) भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै प्रायः सबैका कान ठाडो हुने र यो शब्द देख्ने बित्तिकै आँखाहरु टक्क रोकिने गर्छन् । अर्थात हाम्रा ज्ञानेन्द्रीयहरु चनाखो हुन्छन्, अनि जिज्ञासु र कौतुहल बन्छन् । यो शब्द जसमा यति ठूलो शक्ति छ
भोक, निद्रा, प्यास जस्तै यौन पनि मानवीय आवश्यकता हो । उमेर, परिस्थिति तथा व्यक्तिअनुसार यौनको चाहना पनि फरक–फरक हुन्छ, तर यौन उत्तेजना नै नहुनु तथा यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न नसक्नुलाई गम्भीर कुरा मानिन्छ । यसका पछाडि शारीरिक वा मानसिक वा दु
यसरी थाहा पाउनुहोस प्रेमीकाको यौन चाहना
अनलाइन दर्पण 2019-09-03
प्रेममा शारीरिक सम्बन्धले कति महत्व राख्छ ? यो आ-आफ्नो बुझाई र भोगाइमा निर्भर गर्ने कुरा हो । कतिले ठान्छन्, प्रेम शुद्ध प्रेम मात्र हुनुपर्छ । कतिले यसलाई रो’मान्सको रुपमा लिन्छन् । प्रेमी पनि त कोही आदर्श हुन्छन्, कोही विन्दास । कोही सं&rs
सर्पको यौन जीवन
अन्य सरीसृपजस्तै सर्पले पनि यौन सम्पर्ककै माध्यमबाट आफ्नो वंश वृद्धि गर्छ । सर्पको यौन क्रियाकलाप रमाइलो पनि हुन्छ । यौन सम्पर्क गर्नुअघि भाले र पोथी सर्प दुवैले एक–अर्कालाई छल्ने, जिस्क्याउने आदि काम गर्छन् । छल्ने, जिस्क्याउने क्रममै उनीहर
शारीरिक सम्बन्ध राख्न उमेर हद् कति हुन्छ ? याैनविज्ञ यसो भन्छन
अनलाइन दर्पण 2019-08-08
आयुष्मान खुराना फिल्म ‘वधाई हो’ मा आफ्ना बाबुआमाको सेक्स जीवन अझै क्रियाशिल छ भन्ने मान्न तयार छैनन् । फिल्मको एक दृश्यमा खुराना भन्छन् ‘यो पनि काहीँ बाबुआमाले गर्ने कुरा हो ।’
हास्यरसले भरिएको यो दृश्यले दर्शकलाई
हप्ताको यो दिन महिलाहरु अधिक यौनसम्पर्क गर्न चाहन्छन्
अनलाइन दर्पण 2019-08-04
यौनसम्पर्कलाई लिएर विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठो तथ्य सार्वजनिक हुने गर्दछ । बेलायतमा गरिएको एक सर्वेक्षणले शनिबारको रात महिलाहरु सबैभन्दा बढी सेक्सी हुने गरेको रहस्य बाहिर ल्याएको छ । बेलायतको हेल्थ एण्ड ब्युटी रिटेलर सुपर डगको अध्ययनअनुसार धेरै
माया भनेको त यस्तो होस , वैवाहिक एनिर्भसरीमा श्रीमानले दिए श्रीमतीलाई मृगौला उपहार
अनलाइन दर्पण 2019-08-02
श्रीमानले श्रीमतीलाई विवाह एनिभर्सरीमा सामान्यतया लुगा, गरगहना इत्यादी उपहार दिने गर्दछन् । कसैले महंगा महंगा सामानहरु पनि दिन्छन् । तर अमेरिकामा एक श्रीमानले भने आफ्नो श्रीमतीलाई अंग नै उपहार दिएका छन् ।
आफ्नो २३ औं एनिभर्सरीमा आफ्नो अं
पुरुषले आफ्नो यी तिन अंग हेरोस भन्ने चाहन्छन महिलाहरु !
अनलाइन दर्पण 2019-06-30
प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेरपनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ । त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन ।
विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक
होचा व्यक्ति सेक्समा अव्वल
अनलाइन दर्पण 2019-05-23
होचो वा छोटो कद भएका व्यक्तिहरु ओच्छ्यानमा वा सेक्समा अव्वल हुने एक अध्यनले देखाएको छ । यौन सम्पर्कको समयमा होचा ब्यक्तिहरु अग्ला ब्यक्तिहरुको तुलनामा बढि नै ससक्त हुने उक्त अध्यनको निष्कर्ष छ ।
छोडपत्र गरेको श्रीमानसँग सहवास हुन थाल्यो, के गरौं ? डा करुणाले दिइन् यस्तो गज्जबको उपाय
करुणाजी, म ३१ वर्षीय एकल महिला हुँ । मैले २४ वर्षको उमेरमा एकजना सञ्चारकर्मीसँग विवाह गरेकी थिएँ । डेढ वर्षपछि नै हाम्रो सम्बन्धमा विभिन्न समस्या आउन थाल्यो । हाम्रो सम्बन्ध बिग्रनुमा श्रीमान्को मात्र गल्ती थियो भन्ने होइन । यही कारण सम्बन्ध सुधार
यसरी थाहा पाउनुहोस् आफ्नी प्रेमीकाको यौन चाहना
प्रेममा शारीरिक सम्बन्धले कति महत्व राख्छ ? यो आ-आफ्नो बुझाई र भोगाइमा निर्भर गर्ने कुरा हो । कतिले ठान्छन्, प्रेम शुद्ध प्रेम मात्र हुनुपर्छ । कतिले यसलाई रोमान्सको रुपमा लिन्छन् । प्रेमी पनि त कोही आदर्श हुन्छन्, कोही विन्दास । कोही संवेदनसिल हु
महिलाहरुमा ४० कटेपछि फेरि किन बैंस आउछ ? यस्तो छ कारण
अनलाइन दर्पण 2019-05-17
भनिन्छ नि चालिसे लागेछ बैस जागेछ । यो उखान पहिलेको बुडापाकाहरुले भन्ने गरेका हुन । बुडापाकाका अनुसार जिवनमा पहिलो १६ वर्ष र दोख्रो ४० वर्षमा गरी २ पटक बैस जाग्छ रे ।
यस्तैमा आज हामी आज तपाईहरुलाई महिलाहरुको ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहन
विज्ञानकाे नयाँ खुलासा:चालिस कटेका महिला यौनमा बढी सक्रिय
अनलाइन दर्पण 2018-10-02
उमेरले चालिस तथा पचासको दशकमा पुग्नु भनेको उमेर पाको भएको वा आधा जीवन व्यतित भएको भन्ने बुझिन्छ। तर यौनका मामिलामा भने चालिसको दशकमा महिलाले आफनो जीवन भरमा सवैभन्दा बढी सक्रिय हुने समय रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
एक इन्जिनियर यसरी बने पुरुष यौनकर्मी
अनलाइन दर्पण 2018-09-24
‘तिमीलाई थाहा छ, तिमी कहाँ उभिएको छौ । यहाँ शरिरको मोल मोलाई हुन्छ ।’
म अर्थात् एक पुरुष, निलो, गुलाबी बल्ब राखिएको यो कोठामा आफूलाई बेच्नका लागि उभिएको थिएँ ।
मैले जवाफ दिएँ, ‘हो, थाहा छ तर पैसाको लागि म जे प